Goorma ayuu Leo Messi safanayaa kulankiisa koowaad isagoo xiran funaanadda PSG? | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Goorma ayuu Leo Messi safanayaa kulankiisa koowaad isagoo xiran funaanadda PSG?
Goorma ayuu Leo Messi safanayaa kulankiisa koowaad isagoo xiran funaanadda PSG?
(Paris) 18 Agoosto 2021 – Hilinka Ciyaaraha ee Sky Sports ayaa sheegay in halyeeyga reer Argentina uu kulanka 1-aad u dheeli doono kooxdiisa cusub ee PSG 29-ka Agoosto, kaddib markii uu kasoo wareegey kooxda Barcelona.
Sky ayaa intaa raaciyey in Messi oo ka xiddigeeyey guushii xulkiisa Argentina oo hantay Copa America oo ay Brazil ka qaadeen, uu 3 jeer tababar la qaatay kooxda Mauricio Pochettino ee PSG.
Jookarkan kubadda ku falan ayaa ilaa haatan seegay 2 kulan oo Ligue 1 ah, iyo sudoo kulankii Champions Trophy ee ay ka qaadday kooxda Lille.
Messi ayaa sidoo kale seegi doona kulanka Jimcaha ee ay kooxdiisu u safrayso Brest si uu u diyaariyo fayaqabkiisa jireed, balse ugu dambayn waxay taageerayaashu kulankiisa 1-aad daawan karaan 29-ka bishan Agoosto.
PSG oo suuq xagaagan ka xiddigaysay ayaa soo qaadatay laacibiinta Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma iyo Gini Wijnaldum oo gebigood wada bilaash ah iyo Hakimi.
Previous articleDAAWO: Daalibaan oo ay ka hor timid diidmadii 1-aad (Magaalo diiddey in la dejiyo Calanka Qaranka & dad ku dhintay)
Next articleIlhaan Cumar oo lagu caddeeyey go’aamo is burrinaya oo ay ka qaadatay Afghanstan (Ma aha markii 1-aad)